Google ၏ Search Features များ | AnZarTone
by AnZarTone Google ၏ Search Features များ
Google’s Search Features
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ ငွေကြေးကို MMK လို့ အတိုကောက် သုံးပါတယ်။ အရင် Burma အနေနဲ့ တုန်းက BUK လို့ သုံးပါတယ်။ (ကျွန်တော် စမ်းကြည့်တာတော့ Google ရဲ့ Search Result မှာ MMK ကို အခြား ငွေကြေးလို တိုက်ရိုက် ဖော်ပြပေးခြင်း မရှိပါဘူး။) ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများရဲ့ ငွေကြေး အတိုကောက် စာလုံးများကို ဒီနေရာ (http://fx.sauder.ubc.ca/currencies.html) မှာ သွားကြည့်လိုက်ပါ။
This entry was posted in Blog and tagged anzartone, google search features. Bookmark the permalink.
← ဘီလူး သုံးမြွှာပူး	ဥပေက္ခာ →